Mana isan’andro – Alakamisy 16 Jolay 2015 – Athis Fanantenana
Mana isan’andro – Alakamisy 16 Jolay 2015
EZEKIELA 45. 1-17 F. 3
Any am-pahababoana ny zanak’Israely no anehoan’Andriamanitra fa mbola haveriny ho firenena. Ny tena zava-dehibe amin’izany dia fametrahana mazava tsara ny toerana masina hanaovana ny fanompoana Azy. Ho ivo sy miantoka ny fisian’ny firenena mihitsy izany mba tsy hahatonga ny olona hanadino an’Andriamanitra eo amin’ny toerana nomeny azy ireo.
Aiza ary mahao ahoana no toerana misy ny Tompo eo amin’ny fiainako sy eo amin’izay nomeny ho ananako ?
Ny toeran’ny mpitondra sy ny vahoaka.
Ny toerana voatokana ho an’ny mpanjaka eto dia maneho fa mila manakaiky kokoa an’Andriamanitra izy amin’ny fitondrany ny vahoaka. Sady olon’Andriamanitra no olon’ny vahoaka ny mpitondra. Mazava tsara arak’izany izay andrasan’Andriamanitra amin’izy ireny : tsy mampahory ny vahoaka, mitsara sy mandeha amin’ny fahamarinana, tsy mandroaka ny olona, miantoka ny hisian’ny fahitsiana (refy sy lanja marina), miantoka fanatitra manokana izay miditra fa mila mitondrana ny vahoaka ho ao amin’Andriamanitra koa izy. Ny vahoaka koa anefa dia manana andraikitra hifandray mivantana amin’Andriamanitra fa tsy miandry na miantehitra fotsiny amin’ny mpitondra.
Toko telo mahamasa-nahandro nataon’Andria-manitra ho an’ny firenena iray ny mpisorona, ny mpitondra ary ny vahoaka. Samy manana ny anjara andraikitra tandrify azy avy kanefa tsy afaka misaraka raha tiana handeha tsara ny raharaham-pirenena. « Raha misaraka amiko kosa ianareo » hoy Jesoa Kristy, « dia tsy mahay manao na inona na inona » (Jaona 15. 5).
« Jesoa Tompo ô ! Havaozy ny firenenay mba hijoro tsara ny fiangonana, hihaino sy hanaiky Anao ireo mpitondra, ary hanana fahatahorana sy fanajana Anao ny vahoaka. Amena.”
Teny mivohitra: Toeran'Andriamanitra